XNXX: 3 tilmaamood si aad ula yaabto lammaanahaaga sariirta - KU SII SAAR
Mararka qaar waxaan u muuqanaa inaan la qabsano raaxeynteena yar marka loo eego galmada. Laakiin si aad u xayeysiiso cilaaqaadkaaga hoostiisa, waa kuwan 3 tilmaamood oo aad kaga yaabineysid lamaanahaaga sariirta!
Markii aad muddo dheer xiriir ku dhex jirtey, mararka qaar way adag tahay in la helo hab si aad udhigto waxyaalaha udgoon ee hoostiisa. Xitaa ka sii badan marka ay adag tahay in la is dejiyo inta lagu jiro jacaylka. Runtii, xaaladaha noocaan ah, waxaan u muuqanaa inaan ku nasanno caruurteena oo aannaan ka tagin aagdeena raaxada. Si kastaba ha noqotee, ma aha wax aad u adag in lala yaabo qof noloshooda la wadaaga dhaqdhaqaaqyo yar-yar oo isbedel sameyn doona. Oo haddii Trendy soo jeedisay inaad hesho meelo lagu sameeyo jacayl ku saleysan astaantaada astrological, halkan waxaa ah 3 talo oo aad kaga yaabineyso lamaanahaaga sariirta.
Jawil cariiri ah ayaad abuuri doontaa
Si aad uga careysiiso laxanka nolol maalmeedka wax yar, waxaad ku bilaabi kartaa adoo abuuraya jawi kale. Waxaan kugula talineynaa inaad si lama filaan ah ugu riixdo adigoo u diyaargaroobaya wax inta aad maqantahay / wehelkaaga / wehelkaaga. Markaa waad qori kartaa go'yaal satin qurux badan, waxaad diyaarin kartaa ubax, shumacyo fudud, diyaarin saliidaha duugista iyo dooro dharka galmada ama muxuu u diidi kari waayey labbiska Eve ama Adam? Tani waa hubaal inay la yaabto gacaliyahaaga markuu ku soo noqdo oo aad ugu farxo inta ugu badan. Marka la soo gaabiyo, hubi inaad beddesho qurxinta qolka si aad daqiiqadda uga dhigto mid cusub oo ka duwan.
Jagooyin aan caadi ahayn ayaad baran doontaa
Haddii aadan run ahaantii dooneynin inaad gasho xaalad murugsan, waxaad sidoo kale ku fiirin kartaa khadka tooska ah si aad wax uga baratid jagooyinka cusub. Marka, Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku soo qaadato tamar cusub oo ku saabsan baaraha waxaan shaki ku jirin inay noqon doonto waqti qayaxan oo labadaba lagu xoojiyo isku xidhnaantaada laakiin sidoo kale laba ku farxi. Si aad ugu guuleysato inaad la yaabto lammaanahaaga, waxaan kugula talineynaa booska masar tusaale ahaan u baahan dabacsanaan gaar ah laakiin taas oo noqon doonta il farxad dhab ah. Laakiin waxaa jira jagooyin badan oo sidan oo kale ah.
Door ciyaar ayaad diyaarin doontaa
Tani waxay noqon kartaa mid aad u qosol badan waxayna kuu ballan qaadi kartaa daqiiqado bini-aadam ah oo aan hore loo arag. Maxaad naftaada u gelin kabaha jilayaasha kala duwan si kor loogu qaado rabitaanka? Waxaan si cad uga fikirnaa astaamaha sida dhaqtarka iyo kalkaalisada, tuugga iyo tuugada, tuubbada iyo macaamiisheeda, laakiin waxaa jira kuwa kale oo badan. Adiga ayey kugu jirtaa adiga inaad aragto waxa ugu yaabka badan lamaanahaaga isla markaana ku siin kara daqiiqad ka bixi doonta wadada la garaacay. Ugu dambeyntiina, xusuusnow in isgaarsiinta ay sidoo kale wax badan ka tarayso isu-socodka galmoodka. Haka labalaabin inaad uga hadasho waxyaalaha aad jeceshahay qofka nolosha la wadaaga.
isha: https: //trendy.letudiant.fr/le-conseil-sexy-du-lundi-3-tips-pour-surprendre-son-sa-partenaire-au-lit-a4880.html